दिल निशानले कोरोनाको ओैषधी बनाउ भनेपछि : महाविर पुनले दियो यस्तो जवाफ ! « Online Tv Nepal
दिल निशानले कोरोनाको ओैषधी बनाउ भनेपछि : महाविर पुनले दियो यस्तो जवाफ !
Published : 14 March, 2020 10:31 am
सामाजिक सञ्जालबाट चर्चित बनेका दिल निशानी मगरले महाविर पुनले स्थापना गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई ‘बाँदर धपाउने मेशिन बनाउने थलो’ भनि टिप्पणी गरेपछि निकै विरोध छ । उनले गरेको टिप्पणी प्रति धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन् ।
दिल निशानीले गरेको चुनौतिपूर्णं टिप्पणीप्रति महाविर पुनले आफुँहरुलाई कोरोनाको औषधी पत्ता लगाउने अवसर भएपनि ल्याकत नहुने बताएका छन् । उनले विश्वका कयौं देशहरुले ठुलो धनराशी खर्च गर्दा नसकेको आविष्कार आफुँहरुले पत्ता लगाउने कुरा निकै चुनौतिपूर्णं हुने टिप्पणी गरेका छन् ।दिल निशानीले गरेको टिप्पणीमा महाविर पुनले गरेको प्रतिक्रिया अहिले निकै भाइरल पनि बनेको छ । धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले दिल निशानीको उटपट्यांङ्ग प्रश्न प्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् ।
महाविर पुनले आविष्कार गर्न सक्छन् भने कोरोना भाईरसको औषधी आविष्कार गर्ने हो। आजको युगमा त्यो नाथे बाँदर धपाउने मेशिन बनाएर कोही आश्चर्य मान्ने छैनन्।‬
यस्तो छ महाविरको जवाफकृपया सम्पूर्ण नेपालीहरुले भाई दिल निसानी मगर लाई धेरै धेरै धन्यबाद दिनुहोस. किन भने भाईले युरोप तिरै बसेर गहिरो ध्यानदृष्टि गर्दा उनको तेस्रो आँखाले सारा नेपालीको कठोर परीश्रम र पसिना बाट बल्ल बल्ल बन्दै गरेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र लाई देखेछन । देखेको मात्र कहाँ हो र ? उनको अन्तरात्माले यस केन्द्रको क्षमता पनि अद्भुत नै भएको थाहा पाएछन् । अब केहि होला जस्तो छ ।
कृपया कसैले पनि गाली गलौज पटक्कै नगर्नु होला किन भने हामी नेपालीहरुको भलो चिताउने महान व्यक्तिहरुलाई गाली गर्ने साह्रै नै नराम्रो बानी छ । सायद म पनि मगर नै भएको हुनाले दिल निसानी मगर भाईले मलाइ यस्तो कृपा गरेको पनि हुन सक्छ ।